I-solo-soloist yeqela elithi "Leningrad" u-Alisa Voks uthetha ngeenkcukacha ngokufa kwakhe
I-intanethi yabuya ikhupha iindaba ezibi zengozi yomgwaqo phantsi kwePetros. Ngokwamaphephandaba, emotweni yayingu-soloist yangaphambili yeqela elithi "Leningrad" i-Alisa Vox kunye nomlawuli wekhonsathi yakhe. Ekubeni kwaxelwa ukuba "udumo" uMercedes aluxhomekeke ekubuyiseni, kwaye imeko yabagibeli kunye nomqhubi ayengacacisiwe, kukho iindlebe kwiwebhu malunga nokufa komculi.
Ukucacisa iindaba zamva nje ngeengozi eSt. Petersburg, omnye wabapheli bezama ukudibanisa nomlawuli uAlisa Vox.
UAlisa Vox, owenza "uMboniso" owaziwayo, waphika amahlebezi endlela yokufa
Umlawuli we-Alisa Vox wamangaliswa gqitha xa wayebizwa ngokuba ngumbuzo wokuba wayephila okanye cha. Le ndoda, edidekile, yanyula intloko kwaye yagqiba ukuba isaphila. Umqondisi womlawuli wabelana "nokufumanisa" kwakhe ngombhali weendaba. Umnyathelisi waphinda wachaza ulwazi, wabuya wathi, ukuzisola ngenxa yokungabikho kwesandi esikhulu.
Yonke le mbali ibonwe ngokucacileyo namhlanje kwi-Instagram yakhe ngu-Alisa Vox ngokwakhe, apho abaphulaphuli bakhumbula njengomdlali we-"Leningrad" malunga ne-labuteny. Ngelo xesha, umculi wabeka isithombe sakhe emotweni, ngaloo ndlela kucacisa ukuba iindaba zamva nje malunga neengozi ezibandakanya i-Alisa Vox yidada lephephandaba.
Abafaki bomculi bavakalisa uvuyo kunye novuyo ngenxa yokuba lowo owayengumculi we-"Leningrad" yonke into ilandelelwe kwaye ucebise ukuba angayithobeli ingcali ezingaphelelanga zengcali:
strmdgddn Indlela yokuchonga ukuba umntu ufile okanye uphile? Buza yena, yonke into inengqiqo!
Darri2610 UThixo wam, akusikho nto abayithethayo yokuba siyizidenge iminyaka eyikhulu ukuze singenzi. Nangona uchazile, ngokuqinisekileyo, yonke into ehlekisayo, kodwa i-joking-jokes, kwaye unomdla ngakumbi !!
Zingaphi idiot kwi-profession. Alice, yakha. Umshicileli womculi, iindlebe zobuqhetseba!
marina_glomozda Ndothuswa ngabantu abathandekayo
bolshayaksu Yiba nolonwabo kwaye uphilile !!!
UVictoria Bonu uvalelwa kwisikhululo sase-Nice
Umfazi wokuqala kaDmitry Tarasov wanquma ukuzukisa umyeni wakhe wangaphambili
U-Polina Dibrova uthetha ngokukhulelwa okutsha: umfazi we-TV ummemezeli ufihla isisu sakhe
Umtshato we-Navka nePerkov: iifoto ezona zilungileyo kunye neenkcukacha ezenzakalisayo
Indlela yokukhetha ukunqunyulwa kwabantwana: iibhotile, abaphuza kunye neengono
Ukutya okuncedo komzimba kunye nezitho zangaphakathi
I-Spaghetti kunye ne-cocktail yase-sea
I Easter Bunny Buns
Iipancake zithwele i-yoghurt kunye namajikijolo
I-Skewers yengxowa yengulube
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-jade
Ngaba abafazi abakhulelweyo bangabaleka kwi-resort?
Gcoba kwiqanda leqanda
I-Recipe yesaladi esiphunga amaqanda kunye namakhukhamba